Mhenderekedzo dzakanakisa muAtene | Absolut Kufamba
Mhenderekedzo dzakanakisa muAtene
maruuzen | | Updated on 15/04/2021 11:16 | Chania
Greece yakafanana nemabhishi, zhizha, zororo rinonakidza kana kufamba pakati pematongo ekuchera matongo. Chinhu chinowanzoitika kuziva guta guru tobva tasvetukira kune chimwe chezvitsuwa zvacho, asi kana tikasagara muAtene nenzvimbo dzakatipoteredza kune mamwe mahombekombe makuru.
Saka, nhasi ngatitaurei nezvazvo mabhishi akanakisa muAtene.
1 Mahombekombe eAtene
2 Mhenderekedzo pamhenderekedzo yekumaodzanyemba yeAtene
3 Mahombekombe ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAtene, padyo neSounio
4 Mahombekombe ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAthens padyo neMaraton
Atene inoshambidzwa nemvura ye Gungwa reAegean saka isu tinowanawo mahombekombe akanaka uye ari pedyo padyo nemahombekombe ezvitsuwa. Hazvirevi kuti vanosvika pakuvatorera, zororo kuGreece rinenge rakaremara pasina rwendo rudiki kuenda kuzvitsuwa, asi kana iwe usina nguva kana iwe uchingo pfuura nemuguta guru reGreek, ipapo aya mabhishi achapa iwe kugutsikana.
Ichokwadi ndechekuti mahombekombe padyo neAtenas akawanda, uye kune mamwe emhando yepamusoro uye akarongeka akasarudzika kutetepa mabhishi, ane jecha diki uye vanhu vashoma. Zvakanaka, ongorora uye Zvese zvinoenderana nenguva yemahara yauinayo uye nezvakawanda sei zvaunogona kana kuda kubva pakati peguta.
Neraki, kana iwe uchinetseka nezve iyo mhando yemvura saka padyo neguta hombe mhinduro ndeyekuti ivo vari zvakanakisa, zvirinani ndizvo zvinotaurwa neEuropean Environment Agency.
Mhenderekedzo pamhenderekedzo yekumaodzanyemba yeAtene
Aya mahombekombe vari kune rimwe divi reAttica uye ivo vakanaka kana usina nguva yakawanda kana usina mota. Kumahombekombe ekumaodzanyemba aya inosvika nyore netaxi, bhazi kana chitima. Ngatione, heino Astir pamhenderekedzo, yakanakisa.
La Astir kumahombekombe Icho chimwe chei pamusoro mahombekombe eAtene. Iri munharaunda yakanakisa yeVouliagmeni uyezve ine masevhisi ese. Ndiri kureva, iwe unogona kurenda sunbeds, amburera uye kunyange kunakidzwa nekubatana WiFi. Uye kutengeswa kwechikafu nekumwa hakusi kushayikwa futi. Ehezve, harisi rakachipa pamhenderekedzo uye iwe unofanirwa kubhadhara yekupinda: 25 euros muvhiki, 40 euros pakupera kwevhiki, pamunhu mukuru.
Hongu, mutengo wakakwira uye pakupera kwevhiki mumwaka kune vanhu vazhinji, uye pamwe lounger kana amburera haisi kuwanikwa. Unogona pre-book, hongu, asi zvichiri zvakaoma. Astir gungwa rakakosha kana iwe uchida kuona uye kuve pakati pevanhu vakanaka uye vakanaka. Inovhura na8 mangwanani uye inovhara na9 usiku, asi kana ukagara pakudya kwemanheru muresitorendi unogona kugara kusvika pakati pehusiku.
Rimwe gungwa ndiyo kavouri beach, munharaunda imwechete yeVouliagmeni. Mhenderekedzo yegungwa peninsula ine miti ine paini miti uye dzimba dzinodhura. Kune mamwe mitsetse yejecha uye iwe unogona kushambira, kunyange chikamu chakakurumbira chiri Megalo Kavouri, kumadokero kure, nemamburera nemabhedhi ezuva emubhadharo asiwo nzvimbo dzemahara.
Kavouri Gungwa igoridhe jecha uye ine akadzikama mvura zvakanaka mukati megungwa. Kusvika ikoko hakuna kunetsa nekuti unokwanisa tora metro kuenda kuElliniko chiteshi uye kubva ipapo bhazi 122. Neraki zvakare ine yekutengesa kwekudya nekumwa.
El Gungwa Vouliagmeni Icho chinoshamisa chimiro chegeological padyo negungwa uye ine gungwa. Mvura ine munyuIvo vanouya pasi pemvura yepasirese kuyambuka gomo, uye pamhenderekedzo kune machira ezuva uye maamburera. Chikamu chemvura padyo nemahombekombe hachina kudzika, asi kune rimwe divi chine kudzika kusingazivikanwe, saka chenjera. Sezvo riri dziva zvaro mvura inodziya zvishoma pane yegungwa kudaro mwaka unowana mukurumbira.
Iwe une zvaunogona kuita zvakawanda, pane beach bar yakanyanya nyore, yakavhurwa zuva rese, inoshandura makamuri, mashawa, mukana wewiricheya uye yekudyira. Kana zuva ranyura zvishoma uye rikadzikama, mumhanzi unotanga kurira. Muzhinji, iri rakadzikama pamhenderekedzo pane iro regungwa.
Kana iwe uchida kushambira mugungwa ipapo wako mahombekombe ndiyo Thalassea pamhenderekedzo. Iri mudhorobha reVoula, kumaodzanyemba kweAthens, uye ine masevhisi mazhinji. Unogona kukwereta mubhedha wezuva uye amburera nemitengo yakanaka uye muzhizha kune kazhinji mapato uye vaimbi vane mukurumbira.
Pamazuva evhiki iwe unobhadhara mari yekupinda ye5 euro pamusoro uye 6 pakupera kwevhiki. Unogona kusvika ikoko nekutakura veruzhinji, kungave nekutora iyo metro uye kuburuka pachiteshi cheElliniko uyezve kutora bhazi 122 kana kutora tramu kune chiteshi chayo ndiAsklipio Voulas.
La Yabanaki Gungwa Iyo inowanikwa munharaunda yeVarkiza uye inoita mhando ye theme paki nekuti inopa zvinopfuura kungoita gungwa. Kune chikafu chinokurumidza, kofi, zvinwiwa, chikafu chegungwa, chinowanzo chikafu cheGreek uye unogona kudzidzira mitambo yakawanda yemvura, kubva kune inonakidza bhanana chikepe kuenda kunzvimbo yekumvura, kufefetera mhepo kana kupakata bhodhi.
Kubva Muvhuro kusvika Chishanu mari yekupinda ndeye 5 euros asi mwero unosanganisira yekuzorora yezuva uye amburera. NeMugovera neSvondo mukova uri maeuro matanhatu asi iwe unofanirwa kubhadhara imwe maeuro mashanu kune amburera, kunze kwekunge iwe uchipinda mushure memanheru manomwe.
Unosvika sei pamhenderekedzo iyi? Unogona kutora metro zvakare kuEllinko chiteshi uye kubva ipapo bhazi 171 kana 122.
Kune rumwe rutivi, Edem beach ndiyo iri padyo neAthens, pakati pematunhu eAlimos nePalio Faliro. Iri igungwa rakarongeka, ine boardwalk kuti vanhu vanofamba-famba uye zvinokutora iwe kune mamwe madiki maviri emahombekombe ari padyo, hofori chess board uye akasiyana masevhisi Zviri nyore kusvika ipapo netiramu, kuburuka pachiteshi chezita rimwe chete.
Mahombekombe ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAtene, padyo neSounio
Iyo yekumaodzanyemba nzvimbo yekuAttica peninsula iSounio, uko kwakanaka Tembere yaPoseidon, yakakurumbira mumaawa emanheru. Asi kusvikira wasvikapo, mumakiromita makumi matatu nemashanu emhenderekedzo yegungwa, kune mahombekombe mazhinji. Hongu zvirokwazvo, unoda mota kuti usvike kwavari.
La Sounio pamhenderekedzo Ine maonero asingatendeseki etembere inozivikanwa, igungwa rakarongeka uye rine masevhisi mazhinji. Kune zvakare yeruzhinji uye yemahara zvikamu. Mvura iri pachena saka zvakafanira iyo awa imwe chete kutyaira kusvika pano. Ehezve, chenjera nenguva nekuti mumwaka wakakwirira wezhizha zvinonetsa kupaka mune yakakosha mota chikamu. Mushure mezvo, kune mahotera uko iwe kwaunogona kudya hove uye hove dzegungwa.
La Kape gungwa yakanaka uye ine inonakidza kuona yeAegean. Uriri hwegungwa hwakagadzirwa nematombo madiki uye nemvura yakajeka. Ehezve, ivo vanobva vawedzera kudzika saka iwe unofanirwa kuziva kushambira. Sezvo iri gungwa rawana mukurumbira mumakore achangopfuura, kazhinji kune vanhu vazhinji paMugovera neSvondo. Unogona kutenga chikafu nekumwa pano? Iko kune kantini, asi haisi kugara yakavhurwa saka ungangoda kuunza zvaunopa.
Uye pakupedzisira, kana iwe uchida kufamba usina kupfeka kana iwe ukafamba zvishoma iwe unosvika kune rimwe gungwa, diki, kunova iko kwainoitwa. nudism.
La Asimakis gungwa Izvo hazvizivikanwe senge yapfuura, asi kana iwe waida kuongorora tembere zvishoma usingagare pamahombekombe ari padyo nayo, iyi ndiyo sarudzo. Izvo hazviwanzo kuve nevateereri vakawanda, ndizvo mugwagwa unoenda kuLavrio kubva kuSounio, uye ine jecha rakawanda. Hongu zvirokwazvo, hapana amburera, saka kana usina imwe inogona kusakukodzera.
Asimakis Beach ine nzvimbo yekudyira uye iri awa rimwe kubva kuAthens.
Mahombekombe ekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAthens padyo neMaraton
Iri ndiro rimwe boka remabhishi kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAtene uye zvakare zvakafanira kuve nemota nekuti nenzira iyoyo unosvikako nekukurumidza uye nyore. Iyo yakakurumbira Marathon Hondo yakaitika pano, kuti iwe ugone kusanganisa nhoroondo uye zororo.
Mhenderekedzo yekutanga pane iyo rondedzero ndiyo Schinias Beach, zvakanyanya, zvakanyanyisa, panoperera swamp inova nzvimbo yakachengetedzwa uye sango repine, makiromita matatu chete kubva kuGuva reMaraton. Kushambira pano kwakanaka uye kune mamwe matavern pedyo.
Kumahombekombe ine zvikamu zvakarongeka kupfuura zvimwe, saka unogona kusarudza kuva nevanhu vakawanda kana vashoma. Haisi nyore kusvika nekutakura kwevanhu uye nemotokari zvinotora maminetsi makumi mashanu akareba.
La Dikastika gungwa imwe sarudzo kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu anodzokorora uye asinganyanyo kufarirwa. Iri pedyo chaipo neSchinias beach uye haina jecha, asi matombo. Iyo inzvimbo yakanaka, ine dzimba zhinji dzinoyevedza munharaunda yezita rimwe chete, asi zvirokwazvo, haina amburera uye kurara pasi kunogona kunge kusinganakidze ...
Huye, parizvino mamwe emahombekombe akanakisa muAtene, asi zvirokwazvo havazi ivo voga. Tinogona zvakare kutumidza iyo mahombekombe eLagonissi, Varkiza, Glyfada, Akanthus, Legrena, Flisvos, Yabanaki, Krabo, Niriides kana makoji akanaka eLimanakia.
Kuti unakirwe Atene mahombekombe ramba uchifunga izvo nguva dzose kune vanhu vashoma pamazuva evhiki, chimwe chinhu icho sevashanyi chatinogona kushandisa zvakanaka, kuti mureza weorenji unoreva kuti kune varindi vehupenyu panguva dzakati chete uye kuti mureza mutsvuku zvinoreva kuti hapana, kuti pamabhichi ane marina pane kazhinji korridha mumvura kune vanoshambira nemagwa, Chenjera nazvo, uye kuti pakati paChikunguru naNyamavhuvhu kune mhepo dzakasimba saka panogona zvakare kunge paine mafungu makuru
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Mhenderekedzo dzakanakisa muAtene